Muranka Dekedda Boosaaso oo weli socda. – Bosaso Times News
Muranka Dekedda Boosaaso oo weli socda.
admin October 1, 2017 Muranka Dekedda Boosaaso oo weli socda.2017-10-01T08:44:06+00:00 Puntland No Comment
Waxaa maalmahan ka socday magaalada Boosaaso guux ku wajahan dekedda la sheegay in dhisme lagu darayo magaalada Boosaaso kaas oo dad badani sheegayaan inaysan ku qanacsanayn sida loo dhigay heshiiska, dawladduna ay ku adkeysanayso inay doonayso horumarka dalka, dekedda dhismaheeduna yahay talaabo hore loo qaaday.
Muranka oo inta badan u dhexeeya madaxda dawladda iyo ganacsato/nabadoono insku dhinac ah ayaa waxaa ku jaahwareersan dadka shacabka ah oo ka welwelsan in arinkaasi keeno isku dhac iyo dagaal ka dhaca magaalada Boosaaso.
Dawladdu waxay magaalada keentay ciidamo badan, waxaadna ku arkaysaa wadooyinka magaalada ciidamo hubaysan oo baari taano wada iyo kuwa kale oo u muuqda dhoolatus awoodeed, laguna tusayo dadka dawladdu ku sheegtay qaswadayaasha inaysan isku dayin hor istaag iyo khalkhal abuurid.
Dadka shacabka ah ayaa inta badan wararka ka hela baraha bulshada kuwaas oo inta badan u badan qoraalo been abuur ah iyo kutiri kuteen aan waxba ka jirin, cabsi iyo khalkhal shacabka ku abuuraya. Dawladdu malaha awood ay dadka iyadu warka ugu sheegto marka la eego baraha bulshada iyo bogagga internetka taasna waxay keentaa in beenta iyo ku tirikuteentu faafto dadkuna rumaystaan khiyaaliga.
Waxaa la filayey maanta in dawladdu ku wareejiso shirkadda dhisaysa dekedda si rasmi ah balse taas weli ma dhicin sida wararku sheegayaan. Waxaa laga warsugayaa bilaabida balaarinta dekedda Boosaaso iyo waxa dadka diidani arinkaa ka yeelayaal.
http://www.bosasotimes.com/muranka-dekedda-boosaaso-oo-weli-socda/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/Bosaso-Port.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/Bosaso-Port-150x150.jpg 2017-10-01T08:44:06+00:00 adminPuntlandDekedda Boosaaso,DP Word,PuntlandWaxaa maalmahan ka socday magaalada Boosaaso guux ku wajahan dekedda la sheegay in dhisme lagu darayo magaalada Boosaaso kaas oo dad badani sheegayaan inaysan ku qanacsanayn sida loo dhigay heshiiska, dawladduna ay ku adkeysanayso inay doonayso horumarka dalka, dekedda dhismaheeduna yahay talaabo hore loo qaaday. Muranka oo inta badan u...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Dekedda Boosaaso, DP Word, Puntland
« Ra’iisul Wasaaraha oo xarigga ka jaray Saldhigga Milateri ee Turkiga ka dhisay Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Dhigiisa Sudan »